Runyerekupe zvakare Apple Tarisa muna Chikumi? Hongu, uye inogona kunge iri 40% nhete | IPhone nhau
Isu tinodzoka nerunyerekupe rwezvinobvira kuratidzwa kweiyo nyowani Apple Watch modhi kuApple. Kwekupedzisira Kurume 21 raive zuva iro makuhwa mazhinji akaisa kuratidzwa kweshanduro inotevera yeiyo Apple mhuri asi mune iyo Keynote iyo Apple yakangoburitsa iyo nyowani iPhone SE uye iyo 9,7-inch iPad Pro, yakarungwa nemavara matsva uye tambo dzemhando dzeApple Watch.
Mushure mechiitiko ichocho, vaongorori vanotanga kuburitsa makuhwa matsva anoisa mukana wekuratidzwa kweApple Watch munaGunyana nekusvika kweiyo iPhone 7. Zvingave zvine musoro kufunga kuti Apple inogona kunge yakamirira kuti iise yayo inotevera iPhone kuitira kuti imwe yayo zvishandiso ndiyo Apple Watch maviri, asi muongorori Brian White, kubva kufemu Drexel Hamilton haafunge kuti vachamirira kwenguva yakareba zvakadaro.
Maererano naWhite, iyo itsva Apple Watch inogona kurasikirwa ne20-40% kuwanda kwayo kwazvino pamusoro pekusanganisira tekinoroji nyowani zvinoenderana nenguva maererano nemawadhi akangwara. Zvese izvi kunyangwe paine chokwadi chekuti vamwe vazhinji vaongorori vanotenda kuti iyo Apple Watch inoita zvinhu zvakawandisa uye kuti inofanira kuita zvishoma uye zvirinani.
White anotenda kuti Apple ichafumura iyo itsva Apple Watch kuWWDC pakati paJune, vachiiisa pakutengesa pakupera kwaJune. Izvi zvaizopembedzwa kana isu tichifunga nezvematambudziko avakave nawo nekutanga kwemuenzaniso wekutanga. Inofanira kuyeukwa kuti yakapihwa munaGunyana 2014 Uye zvaive zvisati zvaitika kusvika Kubvumbi 2015 payakatanga kutengeswa mune yekutanga batch yenyika, ichisvika kuSpain muna Chikumi 26.
Saka tichaona kana chiri chokwadi kana kwete kuti Apple inotitambidza iyo nyowani Apple Watch 2 muna Chikumi uye zvakare inoisa pakutengesa nguva pfupi yapfuura uye kwete mwedzi gare gare sezvazvakaitika neshanduro yayo yekutanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Runyerekupe zvakare Apple Tarisa muna Chikumi? Hongu, uye inogona kunge iri 40% yakatetepa
Chero rakatetepa ndinoriwana !!
Apple Watch akadaro
Zvakanaka, sezvo zviri nani, ini handidi kufunga kuti bhatiri richagara kwenguva yakareba sei….
Pindura Apple Watch
Iko, uko, iyo ndiyo data iyo inofarira iwe. Kana iri yakatetepa (kuti ini handinyatsoiona iri gobvu), yakanaka, asi kana iri kubayira kuzvitonga kusati kwamboita kwairi, ndiko kuenda kupiss uye kusatora donhwe. Izvo ZVESE Mwari zvavanogunun'una nazvo mune izvi uye zvinoshanda ZVESE smartwatches ndiko kushomeka kuzvitonga kwavanako, kana Apple, kana chero mhando, inoshandura dhizaini nekudzora iyo zvakanyanya, chingave chinosekesa. Izvo zvaizoratidza kuti kure nekuterera kune vatengi vavo vanozvirega zvachose, uye voita chaizvo zvavanoda. Ehezve, kukanganisa kweizvi zvese kunenge kuri vatengi ekuenderera mberi nekutenga zvigadzirwa zviri kure (zvirinani maererano nepfungwa iyo yandinofunga inonyanya kukosha mune iyi mhando yechigadzirwa uye zvakare yakareba) kupfuura izvo zvatinoda uye pamusoro pezvose yezvatinoda.
Kwandiri rakafuta zvakanyanya. Ini zvakare ndinoona zvakakosha kuti vagadzire iyo skrini yakatetepa zvishoma. Uye zviripachena iyo bhatiri nyaya, hongu, hazvidi kuti utaure nezvayo kanenge.
Chokwadi, iwe unofanirwa kudzikira huremu.
Kana zviri zvebhatiri ... Zvakanaka, zvinotora zuva, handiti? Zvakanaka, kana iyo nyowani ikagara zvakafanana, ichionda, zvakandinakira, hatifanire kuve nemanyepo mazhinji mune izvo kana.
Ini ndinofunga ndinofarira iwo wakaenzana gobvu uye 2 kana matatu matete mabhawa ayo anopa angangoita matatu mazuva ekuzvimiririra, ndinayo uye zvinoita kunge zvisina mafuta.
Kuenzanisa kuzvimiririra pakati peIOS 9.2.1 uye 9.3.1 [Vhidhiyo]